युगसम्बाद साप्ताहिक - पहिला समस्या चिनौं अनि समाधान
Wednesday, 01.29.2020, 02:33am (GMT+5.5) Home Contact
Thursday, 08.25.2016, 10:43am (GMT+5.5)
नेपालको अहिलेको समस्या के हो र यो समस्या सिर्जना हुनुको कारण र कारक को–को हुन् भन्ने गम्भीर विश्लेषणको विषय छ । यही कुरा मनन् गर्न नसक्दा नेपालमा जेजति राजनीतिक परिवर्तन भए त्यसको श्रेय अरुले नै लिने र उनीहरूले नै यसको लाभ लिन खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आम नेपाली जनताले थाहा पाएको यो प्रवृत्ति नेताहरूले थाहा नपाउने कुरै भएन तर उनीहरू यस्तै प्रवृत्ति निम्त्याउन निरन्तर प्रयासरत छन् । त्यसैले त विश्वलाई आश्चर्यचकित पार्ने राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि नेपाली जनताको अवस्था भने झन्झन् कमजोर बन्दैगएको छ । दश वर्षको सशस्त्र जनयुद्ध विदेशी शक्तिको अनेक चलखलकाबीच अन्ततः आफ्नै किसिमले शान्तिमा रुपान्तरण भयो । विश्वका शक्ति मुलकहरूले यसमा खेल्न खोजे, आआफ्ना स्वार्थ लाद्न खोजे अनि प्रभाव विस्तार गर्ने दाउपेच पनि रचे । उनीहरू यसमा धेरै सफल भए, थोरै असफल भए । लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीयता जस्ता विषय उचालिदिन उनीहरू सफल भए । यसको विष अहिले फैलन थालेको छ । ओली सरकारका वहिर्गमनको एउटा कारणा यही हो । भारतको कृपादृष्टि पर्न नसकेको ओली सरकारको ठाउँमा भारतको मित्र भनेर भारतीयहरूबाट प्रचारित सरकार गठन भएपछि अर्को समस्या थपिने चरण सुरु भएको छ ।
नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा भारतका निर्णायक भूमिका रहँदै आयो । १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त पार्न अनि राजाको हातबाट दलहरूको हातमा सत्ता फिर्ता गर्न भारतले नै गठजोड गरिदियो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात संसदवादी दलहरूबीच भारतकै मध्यस्थतामा भारतीय भूमिमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको फल अहिले नेपालले पाइरहेको छ । त्यो सम्झौता गराइदिएको ब्याज भारतले खोजेको देखिन्छ– मधेशवादीमार्फत । विश्व लोकतान्त्रिक अभ्यासमै नयाँ इतिहास रच्दै ८५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले साथ दिएको संविधान जारी भयो । यो एउटा अभूतपूर्व अवसर थियो । तर संविधान जारी भएपछि नेपालमाथि जेजस्तो टिप्पणी र प्रतिक्रिया अनि साथ र सहयोगको प्रतिबद्धता हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । नेपालको निकटतम् छिमेकी मुलुक भारतले संविधानको स्वागत नगरेको मात्र हैन नाकाबन्दी नै गरिदियो ।
अहिले भारतमैत्री सरकार भएका बेला मधेशवादीका माग हुबहु पूरा गराउने प्रयास छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विशेष दूतका रुपमा भारत पुगेका विमलेन्द्र निधिले मधेशका माग पूरा गर्न सरकार कटिबद्ध भएको सन्देश दिएर फर्किए । मधेशवादीहरू कतिबेला सरकारमा जाने ढोका खुल्न भनेर कुरिरहेका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप र त्यो हस्तक्षेप निम्त्याउने नेपालकै नेताहरूको चरित्र कम्ति अत्यासलाग्दो छैन । अझै संविधानप्रतिको असन्तुष्टि जनाउने एउटा झुण्ड बाँकी छ । तर, उनीहरूले बुझपचाएको कुरा के हो भने संविधान कहीं पनि शतप्रतिशत हुँदैन । बिरोध गर्ने र अहिमसत जनाउनेहरू हुन्छन्, तर त्यसको समाधान के त ? आन्दोलन र हिंसा अनि विदेशीको बुई चढेर नै सबै कुरा पूरा हुन्छ त ?
यो संविधान नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो । यसमा विदेशीले थोपरेको एजेण्डा राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । तर राखियो । अनि यही संविधानकै कारण मुलुक विखण्डनको शिकार हुने भय मडारिएको राजनीतिक दलका नेताहरू नै बताउँछन् । त्यसो भए नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्न नसक्ने संविधानको के अर्थ ? तर, सत्तामा रहेका र ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले समस्या चिन्ने प्रयास नै गरेका छैनन् । विदेशीले थोपरिदिएको एजेण्डा बोकेर उनीहरू कहिलेसम्म दिग्भ्रमित भैरहने हुन् पत्तो छैन ।
नेपाल लामो कालदेखि जुन नियतिको शिकार भैरहेको छ त्यसमा एकातिर भारतको वद्नियतले काम गरेको छ भने अर्कातिर भारतको नियत नबुझेर उसैको उपयोगमा आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिको आकाङ्क्षा राख्ने जमातको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । नेपाली जनता अभाव, दुःख–पीडा सहन तयार छन् स्वाभिमान बेच्न तयार छैनन् भन्ने तथ्यबोध यसपटकका नाकाबन्दीमा पनि देखाइदिए । तत्कालीन सरकारले डटेर भारतको सामना गर्याे । मुलुकको आपूर्तिमा भारत निर्भरता तोड्यो । अनि त्यही सरकारले भारतसंगको सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाउँदै गलहत्याइयो ।
भारत निर्भरताको राजनीतिक सोचबाट ग्रसित नेपालका नेताहरूमा अझै राष्ट्रिय चेतको प्रचूर अभाव छ । भारतको मपाइवाद र निहित रणनीतिक स्वार्थको बलिबेदीमा नेपाल कतिसम्म होमिने हो भन्ने चिन्ता अझै यथास्थानमा छ भन्ने तत्वज्ञान सवै देशभक्त नेपालीले गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने भारतले आफ्नो मपाइँवादमा ठेस लागेको ठान्नासाथ नेपालको घाटीमा सुर्केनी लगाउने निर्घिणी कदम चाल्ने गरेको छ । संघीयताको प्रायोजनद्वारा नेपाललाई बिखण्डन र विलयको संघारमा पुर्याउने दीर्घकालीन रणनीति जवर्जस्त रुपमा बनिरहेको छ । यो नेपालको जलस्रोत हत्याउने एकमात्र दाउ हो । यो सब रोक्नसक्ने गतिलो सरकार मुलुकको आवश्यकता हो । अनि समस्याको सही पहिचान गरेर त्यसको समाधान गर्नसक्ने खुबीवाल नेता जनताको खोजी हो ।